Kenya oo sheegtay in weeraradii westgate ay ku dhinteen 59 ruux welina ay howlgalladu socdaan – Radio Daljir
Kenya oo sheegtay in weeraradii westgate ay ku dhinteen 59 ruux welina ay howlgalladu socdaan
Seteembar 22, 2013 4:41 b 0
Nairobi, September 22, 2013 – Wasaarada arrimaha gudaha ee dalka Kenya ayaa shaacisay in ay weli socdaan howlgallo si taxadar leh ay u samaynayaan ciidamada Kenya, kaas oo la doonayo in lagu soo badbaadiyo dad ku jira dhismihii Westgate Shopping mall ee magaalada Nairobi, halkaas oo ay galeen dablay hubaysan.
Joseph ole Lenku oo ah wasiirka arrimaha gudaha Kenya waxaa uu si cad u sheegay in weli dablayda ay ku jiraan gudaha oo ay ku haystaan dad aan tiradooda la aqoon, waxaase la badbaadiyey boqolaal ruux oo ka mid ah dadkii suuqa joogay.
Kenya waxay baahisay in ciidamadda Ammaanka, sirdoonka iyo ciidanka khaaska ah ee dalkaas ay soo furteen 1000 ruux oo ka mid ah dadkii dhismaha ku jiray, dhaawacyada ayaa sii kordhaya, halka dhimashada dadka haatan ay marayso 59 sida dowladdu sheegtay.
?Weerarka lagu qaaday dhismaha Westgate waxaa ku dhintay 59-qof oo rayid ah, waxaana ku dhaawacmay 162-qof oo kale oo ay ku jiraan laba ka tirsan ciidamada dalka Kenya,? ayuu yiri Joseph Ole Lenku oo xukuumadda Kenya ka tirsan.
Xog-hayaha guud ee ururka Laan-qayrta Cas ee Kenya ?Cabbaas Gulleed waxaa uu sheegay in dhaawacyadu ay yihiin in ka badan 200 ruux, oo isugu jira dadkii joogay dhismaha Westgate ee magaalada Nairobi iyo qaar ka tirsan booliska xataa oo howgalka wax ku noqday.
Ciidanka kala gedisan ee Kenya ayaa haatan la wareegay dhismaha Afraad ee dabaqa iyadoo dablaydu lagu hareereeyey qaybaha hoose ee isla dhismaha ganacsiga ee Westgate, balse wasiirka arrimaha gudaha oo arintaas ka hadlay ma uusan shaacin in ay weli cid ka tirsan kooxda qabteen.
Kooxda Al-shabaab ayaa sheegatay masuuliyada weerarka ka dhacay Nairobi, sidoo kale waxay sheegteen in ay weli ku jiraan dhismaha oo ay weeraradu sii socon doonaan.
Ra?isal wasaare Saacid oo shirka Swezerland kadib Turkiga u tegaya heshiis meleteri (Dhegeyso)
Shabaab oo ku celisay in ay sii balaarin doonto weerarrada ay ka wadaan Kenya ilaa KDF ay baxayaan